साउनदेखि मन्त्रीका हातमा ‘म्याकबुक’ ! - साउनदेखि मन्त्रीका हातमा ‘म्याकबुक’ !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २० असार 38 Views
मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई ‘स्मार्ट’ बनाउन सबै मन्त्रीका लागि ल्यापटप खरिद
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई स्मार्ट बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । बैठकमा पेस हुने विषयवस्तु र छलफललाई चुस्त, सटीक र प्रभावकारी बनाउन कार्यालयले बैठक कक्षमा ‘अटोमेसिन सिस्टम’ जडान गर्दै छ ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाले साउनदेखिका मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कागज प्रयोग नगर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरका अनुसार अबदेखि सबै मन्त्रीका हातमा म्याकबुक हुनेछ भने बैठकका विषय मन्त्रीहरूलाई इमेल गरिनेछ। ‘मन्त्रीका म्याकबुकमै बैठकका एजेन्डा हुनेछन्,’ कुँवरले भने, ‘त्यही हेरेर मन्त्रीले छलफलमा भाग लिनेछन्।’
अहिलेको पद्धति भद्दा, प्रभावकारी र मानव जनशक्तिसमेत बढी खर्च भएको पाइएपछि बैठकलाई स्मार्ट बनाउन खोजिएको प्रवक्ता कुँवरले बताए। महत्त्वपूर्णरविशिष्ट विषयबारे भने मन्त्रीलाई बैठक कक्षमा प्रोजेक्टरमार्फत प्रस्तुति दिने तयारी भएको छ।
त्यसो हुँदा विषयबस्तुबारे बुझ्न र छलफलमा भाग लिन सजिलो हुने विश्वास छ। ‘अहिलेजस्तो कागजका ठेली हेर्नु नपरोस् र बैठक पनि चुस्त होस् भन्ने हो,’ कुँवरले भने।
प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधिविज्ञ अस्गर अलीले बैठकका एजेन्डाबारे तयारी गर्न मन्त्रीलाई सजिलो होस् भनेर ल्यापटपरम्याकबुकबाट सुरु गरिएको बताए। ‘यसले मन्त्रीहरूलाई सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउन सहयोग पनि गर्नेछ,’ अलीले भने, ‘ढिलै भए पनि सुरुआत हुनु राम्रो हो।’ सरकारले सबै कार्यालयमा कागज प्रयोग कम गर्दै जाने नीति लिएकाले यसको सुरुवात मन्त्रिपरिषद्‌बाट गर्न खोजिएको हो।
बैठक कक्षमा वाईफाई हुनेछ। मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई ‘पेपरलेस’ बनाउन यो पद्धति अपनाउन लागिएको हो। एउटा बैठकका विषयवस्तु प्रिन्ट गरेर दिँदा एकजना मन्त्रीलाई सय पेजसम्म पुग्छ। त्यो हिसाबले हरेक बैठकमा २ हजार पेजसम्म कागज प्रिन्ट हुने गरेको छ। म्याकबुकरल्यापटपसँग अभ्यस्त र प्रविधिमैत्री नभएका मन्त्रीलाई कार्यालयले सहयोगसमेत गर्नेछ।